बीरे भन्नुहुन्छ ‘ त्रिहत्तर वर्ष पछि सरकारी राहत ’ – Nepalpostkhabar
बीरे भन्नुहुन्छ ‘ त्रिहत्तर वर्ष पछि सरकारी राहत ’
Hemant KC । २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार २२:१३ मा प्रकाशित
जाजरकोट , तीन छोरी , एक छोराका बाबा ७३ वर्षीय बीरे बस्नेन लौरीको सहारामा भेरी नगरपालिका –१ पिपेमा राहत लिन आउनुभयो । ख्याउटे शरीर बुढ्यौली उमेर लठ्ठीको साथमा आएका बीरे हेदैमा थकित देखिनुहुन्थ्यो ।
राहत बुझदै गर्दा आफ्नो सही , आफै गर्न नसकेकोमा दुखी हुँदै यहाँले भन्नुभयो , “ हाम्रो पालामा गोरु जमाना थियो । पढ्ने लेख्ने कुरा कुन चरीको नाम जस्तै भएको थियो । के गर्नु । सही गर्ने , ठुलो मान्छे बन्ने चाहाना नभएको कहाँ हो र ? विद्यालयको नामै नसुनेर आधा उमेर गएको हो । ” विगतलाई सराप गदै राहत वुझेर जंगिएका बीरे साथमा ७२ वर्षको श्रीमती जैमती बस्नेतलाई पनि ल्याउनुभएको थियो ।
उहाँले आफ्ना पीर मर्का कसैले नवुझेको भन्दै जती ,छोरा,छोरी जन्माएपनि बुढेसकालामा यही बुढी काम लागेकी छ भन्दै राहत स्वरुप उपलव्ध गराएको १ बोरी चामल , नुन , तेल र सावुन थर्रर कापेर आफू र श्रीमतीले बोकी घर तीर लाग्नुभएको थियो । छोरा कहाँ छ थाहा छैन । बुहारी आफूबाट छुटिएर अर्को घरमा बसेकी छिन भन्दै उहाँले थप्नुभयो , “ घरमा खाने अन्नको एक गेडा थिएन , नगरपालिकाले चामल दिन्छ जसरी नि आउनुहोला भन्ने खवर वडाध्यक्ष दीपक बावुले गरेपछि चर्को घाममा बुढीलाई ल्याएर आएको हुँ । पहिलो पटक राहत पाएको छु । ”
जनयूद्धको समयमा सरकारी सेनाले माओवादीको आरोपमा यातना दिएका कारण अहिले पनि बीरेको शरीर दुखेर रातभर निन्द्रा लाग्दैन । शरीर देखेपनि उपचार कसले गरिदिन्छ र ? भन्दै उहाँले भन्नुभयो , “ पीडा सहेर , रातीभर एक्लै चिच्याएर बस्छु मेरो पीडा सुन्ने को छ र ? ” बीरे जस्तै भेरी नगरपालिकाले आज देखि राहत वितरणको काम सुरु गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर छाक टार्ने बर्गलाई समस्य परेको भन्दै त्यस्ता स्थानीयवासीको लागत संकलन कार्य भएकाले सोही आधारमा राहत वितरणको काम सुरु गरिएको नगरप्रमुख घर्तीको भनाई छ । नगरले पहिलो चरणमा १५ दिनको प्याकेज वनाएर शुक्रवार देखि वडा नम्वर १ , ५ र ६ का विपन्न तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाइ दाल, चामल, नुन, तेल लगाएतका सामग्रीहरु वितरण सुरु गरेको हो ।
“लक डाउन”का कारण मजदुरी तथा ज्यालादारी काम गरेर आयआर्जन गर्न नपाइ समस्यामा परेका परिवारहरुका लागि नगरपालिकाले १५ दिनको लागि उमेर अनुसार खाद्य सामग्रीको मात्रा तोक्दै राहत स्वरुप खाद्य सामाग्रीहरु वितरण सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार १५ दिनको राहत प्याकेज अन्तरर्गत वडा नं ३, ४ , ८ र ११ मा वाहेक १ हजार १ सय ६ जना विपन्न सर्वसाधारणलाई राहत उपलव्ध गराउन थालिएको हो । वडा नम्वर ३, ४ ८ र ११मा संकलन भएको नामावलीवारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले नगर उप–प्रमुख भावना भन्डारीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यहाँ कति जनाले राहत सामग्री पाउने भनेर एकिन भएपछि मात्रै सो वडाहरुमा राहत वितरण गरिने अधिकृत घर्तीले बताउनुभयो ।
खाद्य सामग्री वितरणवाट भेरी नगरपालिकाको वडा नम्वर १मा ३७ परिवार, २ मा ४३ परिवार, ५मा १७ परिवार, ६ मा १३ परिवार, ७ मा ३५ परिवार, ९ मा २९ परिवार १०मा २९ परिवार, १२ मा २७ परिवार, र १३ मा ३५ परिवार राहत पाउने तथ्यांकमा रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
यो भन्दा अघि भेरी नगरपालिका –१ का स्थानीयले रकम जम्मा गरी विपन्न ६० घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको थियो । नगरपालिकाले राहत वितरणमा बिभिन्न संघ , संस्थाबाट सहयोग समेत लिएको छ । वडा १ मा ३७ घरका १७५ जना लाई कारितास अस्ट्रिलिया , अस्टीलियन एडको आर्थिक सहयोगमा यार्सन नेपालले खाद्यान्न वितरण गरेको छ ।